Pokémon Go mushambadzi wekunyorera anoti kuzara kuzere kune vashandisi 'Google account kukanganisa | IPhone nhau
Pokémon Go mugadziri weapp anotaura kuti kuzara kuzere kune vashandisi 'account yeGoogle itsikidzi
Mazhinji ma blog ayo kubvira pakatangwa Pokémon Go inoita kunge iri kugadzira monograph kune iyo nyowani budiriro yeNintendo, ichiburitsa huwandu hwakawanda hwezvinyorwa pazuva kunyangwe hazvo mutambo wacho usati uchiwanikwa munyika zhinji. Mazuva mashoma apfuura, nhau dzakaburitswa kuti iyo vashandisi vakanyoresa kuburikidza neakaundi yavo yeGoogle, sezviri pachena vasingazvizive, vakatendera kuzara kuzere kuaccount yavo kubva kuGoogle, kuitira kuti kambani ikwanise kuwana ese masevhisi anoshandiswa nevashandisi kuburikidza neGoogle.
Sekureva kwemugadziri Niantic, iko kuzere kuwana kumaakaundi evashandisi vanonyoresa kuburikidza neGoogle account, kwave kukanganisa. Sezvakataurwa neABC News, kuzara kuzere kuakaunzi dzeGoogle kwave kukanganisa sezvo chete iko kunyorera kunofanirwa kuwana iyo yekutanga mushandisi chimiro, kusanganisira ID yako uye email. Niantic inoti iri kushanda pairi kugadzirisa dambudziko nekukurumidza kuburikidza neyekuvandudza.
Uye zvakare, Niantic inotaura kuti Google yakasimbisa kuti chishandiso haana kuwana chero imwe data kana sevhisi kubva kuvashandisi veGoogle kuburikidza nePokémon Go, saka vashandisi havafanirwe kuita chero shanduko mune izvi nyaya. Uye zvakare, Google pachayo iri kushanda kudzikisira huwandu hwezvibvumirano zvakakumbirwa nechishandiso, kudzikisira mukana wekuti mushandisi aite chimiro.
Sezvinei iri dambudziko zvakangobata vashandisi ve iPhone, nekuti hapana mushandisi weApple akaona kuti mumasevhisi kana maapplication anotenderwa kuwana data ravo, kuburikidza newebhusaiti yeGoogle, iyo Pokemon Go application inokwanisa kuwana yavo yese mbiri. Parizvino hatizive kuti chii chichauya nekukurumidza, kana mhinduro yedambudziko rekuvanzika kana kuvhurwa kweNintendo mutambo mutsva mune dzimwe nyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Pokémon Go mugadziri weapp anotaura kuti kuzara kuzere kune vashandisi 'account yeGoogle itsikidzi
Iyo iPhone 7 Mheni EarPods inowoneka zvakare mumufananidzo
Russian Apple Stores ichave nedhipatimendi kugadzirisa iPhone